Teboka vavaka hanimbana ny kaikitry ny alika amin'ny nofy | TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Teboka vavaka mba hamongorana ny kaikitry ny alika amin'ny nofy
Androany isika dia hiatrika teboka vavaka mba hanapotehana ny kaikitry ny alika amin'ny nofy. Ny manaikitra alika na dia eo amin'ny sehatra ara-batana aza tsy zavatra tsara, avelao ihany amin'ny nofy. Rehefa manaikitra alika amin'ny alàlan'ny nofy ny lehilahy iray, dia mety hiteraka fikatsoana, fitokanana, mahatsiravina aretina, fahalotoana ara-nofo ary maro hafa. Inona no lazain'ny Baiboly momba ny alika? Ny bokin'i Filipiana 3:2: “Tandremo ny alika, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, tandremo ny tenanareo amin'ny fivahinianana.” Nanazava ny soratra masina fa mpiasa ratsy ny alika.
Iray amin'ireo fomba hidiran'ny devoly amin'ny fiainan'ny olona ny fampiasana alika. Ny zavatra ho hitan'ny olona toy izany dia tsy afaka intsony izy ireo hiala amin'ny fahalotoam-pitondrantena. Ny hafa, mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalamany sy ny volany izany. Rehefa mahita olona tsy afaka mitsahatra amin'ny fijangajangana na fanitsakitsa-bady ianao dia mety ho azon'ny fanahin'ny alika izy ireo. Indraindray, mety hiteraka tsy fahombiazan'ny fifandraisana izany. Na inona na inona toe-javatra misy dia tsy maintsy mivavaka mafy ianao isaky ny manonofy fa voakaikitry ny alika. Ny vokany ratsy dia mety ho kely ary mety hiakatra amin'ny toe-javatra mampidi-doza kokoa.
Ny nofy dia zava-misy ara-panahy aseho amintsika. Andriamanitra dia mety hilaza aminao ny antony mahatonga ny olanao. Izay no maha-zava-dehibe ny mivavaka lalandava indrindra rehefa misy zavatra ambara aminao ao anaty torimasonao. Manome didy aho amin'ny alàlan'ny fahefana fa ny fanahin'ny alika rehetra misy fiantraikany amin'ny fiainanao dia naringana tamin'ny anaran'i Jesosy.
Andriamanitra Andriamanitra ô, mangataka aminao aho amin'ny herinao mba handringanao ny poizin'ny alika rehetra izay misy fiantraikany amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny fanahy alika rehetra nahatonga ahy hijangajanga na hijangajanga imbetsaka dia mananatra anao aho anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, manoratra amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra aho, ny fanahin'ny fihenan-tsaina rehetra eo amin'ny fiainako izay nentin'ny alika nanaikitra ahy tamin'ny nofiko, manafoana anao aho anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Mandidy aho amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra, ny fahefana sy ny fanapahana rehetra izay miseho amiko rehefa matory amin'ny endrika alika, dia levon'ny afon'ny fanahy masina ianao.
Ny fahefan'ny razana rehetra amin'ny razako izay fantatra amin'ny fampijaliana ny olona rehetra amin'ny taranako dia manafoana anao amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Ry demonia mijangajanga sy mijangajanga, miverena amiko anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, ny alika rehetra manaikitra amin'ny nofy izay misy fiatraikany amin'ny fitomboako ara-panahy, avelao ny afon'ny fanahy masina handoro azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, mananatra ny aretina amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho. Mameno ny torimasako amin'ny ran'i Kristy sarobidy aho. Isaky ny manakimpy ny masoko hatory aho dia manome didy fa ny anjelin'ny Tompo hiaraka amiko amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny demonia mitsentsitra rà rehetra izay miseho amiko amin'ny nofy hamoronana tahotra, manozona anao aho anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Fa voasoratra fa tsy nomena toe-tahotra isika, fa zanaky ny zaza hitaraina hoe Ahba Ray. Tonga amin'ny fanoherana ny endrika tahotra rehetra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Tompoko, mitafy ny fiadian'ny adiko aho. Izaho dia nampiseho ny fiadian'Andriamanitra nanomboka androany. Ny fanahiko dia mahazo hery mihoatra ny natiora amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny zana-tsipìkan'ny demonia rehetra izay voatsipy tao amin'ny fiainako avy tao amin'ny lavaky ny helo, dia averiko any amin'ny mpandefa fito heny amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
Avelao ny afon'ny fanahy masina ho avy ary handrava ny fanafihana rehetra ataon'ny fahavalo amin'ny alika ho mpandraharaha hitazona ahy hatrany amin'ny toerana iray, amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny alika demonia rehetra izay nirahin'ny fahavalo hanaikitra ahy amin'ny torimasoko hanapotehana ny fanambadiako dia aringako amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny alika demonia rehetra izay nirahin'ny fahavalo hanimba ny fifandraisako dia hianjera amin'ny fahafatesany anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy Tompo ô, mivavaka aho mba hampiasa ny manaikitra ny alika ratsy rehetra izay fahavalo hanimbana ny fiainako sy ny anjarako ho faty amin'ny anaran'i Jesosy.
Manome didy amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra aho fa ny herin 'Andriamanitra tonga amin'ny fanahiko. Ny fahefana hiadiana sy hanoherana ny kaikitry ny alika ratsy ao anaty nofy, avelao izany ho tonga amiko anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Manome didy amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra aho fa ny vatako sy ny fanahiko dia lasa atahorana ny alika manaikitra amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka anio, lasa mpampihorohoro ny herin'ny maizina amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Ny soratra masina dia milaza fa aza mikasika ny voahosotro ary aza manisy ratsy ireo mpaminaniko. Manome didy aho manomboka izao, tsy azo kitihina amin'ny anaran'i Jesosy aho. Manomboka anio, lasa mpampihorohoro ny herin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Mivavaka aho mba handravan'ny ran'i Jesosy ny hery manaikitra rehetra nomena tamin'ny nofiko tamin'ny anaran'i Jesosy.
Fa voasoratra hoe: Izaho mitondra ny marik'i Kristy, aza misy manahirana ahy. Miorina amin'ny fahombiazan'ity teny ity aho ary manapa-kevitra fa tsy ho sahirana amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Ny herin'ny fahavalo dia tsy hanan-kery amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho resy amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Fa voasoratra hoe, I ny nofon'ny tenany ihany no homeny hanina izay mampahory anao, ary ho mamon-drà ny tenany toy ny azon'ny divay mamy. Ary ho fantatry ny nofo rehetra fa Izaho Jehovah am Mpamonjy anao sy Mpanavotra anao, dia ny Maherin'i Jakoba. Fanahy masin'Andriamanitra, mitsangàna ankehitriny hamaly faty amin'ny fahavalo demonia rehetra izay mampijaly ny aiko amin'ny alika amin'ny anaran'i Jesosy.
Tonga manohitra ny fahazaran-dratsy rehetra amin'ny fahalotoana ara-nofo amin'ny fiainako aho, aringako amin'ny afon'ny fanahy masina. Ny endrika fiankinan-doha amin'ny fiainako dia foanako amin'ny anaran'i Jesosy.
manaikitra ny alika
Previous lahatsoratraTeboka vavaka holazaina rehefa te-handray fanapahan-kevitra ianao
Next lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny masquerades amin'ny nofy
Kimberly K Howard Miller Jiona 4, 2021 Ao amin'ny 6: 35 am
Andriamanitra ô, lehilahin'Andriamanitro, tena nilaiko io vavaka io. Notafihin'ny fanahin'ny alika aho nandritra ny androm-piainako ary tsy azoko mihitsy ny antony na ny zavatra nataoko, na amin'ny teny, na amin'ny eritreritra, na amin'ny asa hanokafana varavarana ho an'io fanahy io. Misaotra TOMPO fa nampiasa ity lehilahin'ANDRIAMANITRA tamin'ny fiainako. Amin'ny anaran'i JESOSY dia mivavaka aho mba hitahianao azy sy hitahiry azy ary hamirapiratra aminy ny fahazavanao be voninahitra ary hahazoanao ny voninahitra rehetra amin'ny fiainany. Amena
Fenehoana vavaka amin'ny fahasoavana sy ny famindram-po